Ama-Amazon Associates Central Sucks amabi njengeKhomishini | Martech Zone
NgoMgqibelo, ngoJuni 30, 2007 NgoMvulo, nge-8 kaJanuwari, 2018 Douglas Karr
UJohn Chow kutshanje Ubhale ukuba kutheni engasebenzisi iAmazon kwintengiso yokuhambelana nayo, esona sizathu siphambili sokuba ziikhomishini ziphantsi kakhulu. Sele ndiza kujoyina uJohn ngesizathu esahlukileyo.
IAmazon yenza ukuba kungabi lula ukusebenzisa iphakheji yabo yokudibana. Kuyaphambana maxa onke xa ndingena apho ukuba ndinxibelelane, andikwazi ukuyifumana. Nanku umzekelo. Kutshanje ndiye ndathenga uHerd: Ungayitshintsha njani indlela yokuziphatha kweMisa ngokubopha indalo yethu yokwenyani (ngu UMark Earl) emva kokufunda ngayo kwibhlog kaHugh MacLeod-gapingvoid.
Ndingena kwiAmazon.com Associates Central.
kufuneke ndi Yakha Amakhonkco.
Ndikhetha Izixhumanisi zomkhiqizo kuba ndiyalazi igama lemveliso sele ikhona.
Ndiyangena Mhlambi ngodidi lwemveliso njenge iincwadi.
Ndibuyisa iziphumo ezili-10. Kwezi zili-10, incwadi kaMarko yeyona kuphela ibizwa ngokuba ngu “Herd” kodwa iyinombolo 3 kuluhlu. Inombolo 1 yimfihlo yeNdlovu. Enkosi kwiAmazon!
Ngoku kufuneka ndicofe u "Fumana i-HTML" endizisa kwiphepha elibi ukwenza ikhonkco lam:
Ukuba ndikhetha i-ID eyahlukeneyo yokuNxibelelana ngoku, iphepha lisula lonke ukhetho lwam kwaye kuya kufuneka ndiqale kwakhona. Ulungelelwano.
Ndikopa kwaye ndincamathisela ikhowudi kwi WordPress kwaye uyithumele.
Umfanekiso awubonakali. Ndifumanise ukuba iAmazon ayibandakanyi indlela ehambelana nomfanekiso ngethambeka labo. Bayandithumela nge-imeyile kwaye bandixelele kungenxa yokuba kufanelekile ukuba ndibambe umfanekiso kwiseva yam. Ingaba uyadlala ngam? Ngaba iAmazon ayilokhaya le S3?
Uhlaziyo: Ukuba usasokola ngokwakha amakhonkco akho, ndingacebisa kakhulu ukusebenzisa Isiza esiDibeneyo seAmazon!
Ezinye iingcebiso zoPhuculo lweMveliso zeAmazon:
Beka "Fumana iiKhonkco" zefomathi ethile kwiphepha lokungena lokungena.
Makhe ndakhe itemplate yam endiyithandayo kwaye ndiyigcine kwiakhawunti yam (ndisebenzisa kuphela ubeko olu-1).
Xa ndikhangela into leyo, phendula nge-template ye-HTML endiyityumbe kwinyathelo 2)
Musa ukuthi yi-HTML ngaphandle kokuba iyi-HTML. I-HTML oyibonisayo ayinalo ilungelo I-URI kumfanekiso!
Nceda uthathe iipekseli zokulandela umkhondo womfanekiso kwiikhonkco zakho zombhalo ezilula. IGeesh. Iyanyusa ubeko lwam. Jonga apha ngezantsi apho ndinekhonkco leAmazon kwi "Ajax". Qaphela umsantsa emva kwawo?
Oku kungathatha imizuzu yam engama-20 ukufumana ikhowudi ye-darn kwaye uyihlise phantsi komzuzu. Kukho konke ukunyaniseka, andicingi ukuba uyilo lwale nkonzo inxulumene nayo itshintshile okoko yaqalayo. Umakhi wekhonkco usathumela ngasemva (iAmazon- jonga phezulu Ajax kukhetho lwakho lweencwadi). Kwakubi ngemini ye-1 kwaye yoyikeka ngoku. Ke… ayisiyiyo kuphela ikhomishini esezantsi, ujongano luyanyamalala.
I-PS: Ikhonkco kuHerd ngoku lifakiwe kwifayile yam Ukufunda iphepha. Ndijonge phambili kule!
tags: Amazonamakhonkco okudibana kweAmazonUmhlobo weAmazonamazon onxulumene nokuhlalayokuloba
Juni 30, 2007 ngo-8: 12 PM
Unokuzama iplagi yeWP yeAmazon…
Juni 30, 2007 ngo-8: 22 PM
Enye yeeplagi ezintle endakha ndazibona. Ngelishwa, ndisebenzisa umhleli ocacileyo okoko ndongeza uninzi lweempendulo kunye nemultimedia kwizithuba zam kwaye loo plugin ayihambelani. Ibe yibeta kwiinyanga ezininzi ngoku- ndiyathemba ukuba angayifumana isebenza ngawo nawuphi na umhleli okhoyo!
Kananjalo, nabaphi na ababhali beplagi ngokuqinisekileyo kufuneka bajonge- yenye yeeplagi!
Kananjalo, iAmazon kufuneka inxibelelane ne-manalang kwaye imqeshe ukuze enze iphepha labo elinxulumene nabo !!! 🙂
Jul 3, 2007 ngo-10: 36 AM
Kuya kuba lula kakhulu kuwe ukuba usebenzise le iplagi, nokuba uyifaka kwi-WP emiselweyo. Nam ndisebenzisa umhleli ocacileyo, kodwa ngokungagqibekanga iWP ikwanayo nomhleli wokubhaliweyo osisityebi. Sebenzisa nje umhleli wokubhaliweyo osisityebi ngokungagqibekanga, kwaye uguqule isithuba kwikhowudi yokujonga ukwenza nawuphi na umsebenzi owufunayo. Emva koko tshintshela umva kumbono osisityebi wombhalo ukuze ulahle kwaye urhuqe izinto ze-amazon kwisithuba sakho. Kukucofa nje okongeziweyo, kwaye emva koko ungaqhubeka usebenzisa umhleli owukhethayo ngobuninzi bomsebenzi wakho!
Jul 4, 2007 ngo-9: 53 AM
Ingxaki ngesihleli sesicatshulwa esityebileyo kukuba iyayiphelisa ngokupheleleyo nayiphi na iithegi yeskripthi esishumekiwe (umz. Ukufaka ividiyo yeYouTube).
Jul 1, 2007 ngo-4: 09 AM
Isitokhwe sabo siphezulu malunga ne-70% ye-YTD. Inokuba benza into elungileyo!
Ndizama ukunqanda ezo zinto zinxibelelana nemveliso endaweni yokunxibelelana okunzulu okanye ukunxibelelana ne-thumbnail njengoko usenza kwiphepha lakho lokufunda.
Jul 1, 2007 ngo-10: 57 AM
Bendi rhabaxa kubo, andithi? Ndiyayihlonipha kakhulu iAmazon, uRobert. Batshintshe amashishini okuthengisa kunye nokuhambisa. Ndididekile ngokwenene ukuba inkampani esele ihambele phambili ingabhatala kangako ekufumaneni indawo engaphezulu yewebhu.
Ukuba banokuqhubela phambili ii-API zabo njengoko uGoogle enazo, ndicinga ukuba banokuba nokukhula kwamanani aphindwe kabini kwintengiso yewebhu. Ezinye iinkampani zihambela kwelicala kwaye iAmazon inokugqitha ukuba ayithathi thuba lokutyala!
Jul 1, 2007 ngo-9: 26 AM
Ndizamile i-Amazon okwethutyana umva… Ndigcina ibhokisi encinci yokukhangela kwiNgesi mainpage yebhlog yam ... andinawo umonde wokwakha amakhonkco am ngesandla :)
Kwelinye icala, ndibone uRoger Johansson evela 456Iindwendwe uphumelele kakhulu kwiAmazon? (ungumyili weCSS olunge kakhulu) 🙂
Jul 3, 2007 ngo-7: 18 AM
Ndikwindlela enye nawe, uDoug.
Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, ndizamile ukwenza imali kwiiBlogspots zam ngalo Mlingane kwaye ndangena engxakini efanayo. Umfanekiso awuzange uvele! Ewe bayadlala. 😈
Jul 9, 2007 ngo-8: 16 AM
Ingcebiso entle leyo. Enkosi!
Agasti 28, 2007 kwi-7: 54 AM
Whoops-Ndihlala ndizilungisa iindlela zomfanekiso ndicinga ukuba yimpazamo. Okwangoku, andizisebenzisi ngoku, ngoko ke ndiyaqonda ukuba abanakukhwaza.
Feb 29, 2008 ngo-12: 31 AM
Ndinesizathu esahluke ngokupheleleyo sokwazi ukuba iiAmazon Associates SUCKS. Inkonzo engenamsebenzi ngaphandle kokukhathalela abapapashi bayo. Ndithumele malunga nayo kwibhlog yam .. Sasaza igama!
Nov 9, 2008 kwi-2: 43 AM
Amaqabane eAmazon anelona nkonzo ingenamsebenzi emhlabeni yabathengi. Bayaphendula zingaphelanga iintsuku ezintathu kodwa iimpendulo zabo ZI-INANE. Azikho ngqiqweni. Kufana nokuba bangazikhathazi ngokufunda ngenkxalabo yakho, bavele bayi-blade engenamsebenzi, engenangqondo, nolwazi olungenaxabiso. Ngelinye ixesha bandicela ukuba ndibathumele “ulwazi abalucelileyo” kodwa khange bacele nto kwaphela.
Juni 25, 2008 ngo-7: 43 PM
Inye, njengemali engenayo evela kwiiAmazon Associates kodwa andivumelani ngakumbi malunga nolwakhiwo lwekhonkco. Ndixakeke kakhulu kukungazi ukuba zingaphi iihupu endinazo ukuze ndifumane ikhonkco lemveliso.
Ukuba ufuna ukusebenzisa enye yeewijethi zabo, yimpepho. Kodwa xa ufuna ikhonkco lemveliso nganye, yintlungu yasebukhosini.
Okt 21, 2008 ngexesha 3:18 AM
Ulahlekile inqaku elikhulu lokuba kutheni i-amazon ingasebenzi kakuhle kuninzi lwabantu.
IAmazon ikunika iwindow yeeyure ezingama-24 kuphela ekuthumeleni kwakho imveliso. emva koko awufumani nto.
I-80% yabantu ayizukuthenga ngaphakathi kweeyure ezingama-24.
Ndizama ezinye zeencwadi ezilungileyo kwi-amazon kwaye ndifumana unqakrazo oluninzi.
Ndiqinisekile ukuba abantu abaninzi baya kuthenga into kubo kodwa hayi ngaphakathi kweeyure ezingama-24.
Ukuba i-6% yam ihambile kwaye i-amazon ifumana umthengi omtsha
Ukukhumbula, elona candelo linzima kwi-amazon kukufumana umthengi omtsha ohlawulelayo. Nje ukuba ikwenze oko, iya kwenza lukhulu ngakumbi ebomini bomthengi.
Kwilizwe elifanelekileyo, ndingafumana imali yekhomishini ngalo lonke ixesha lokuphila komthengi endibhekisa kuye.
Ngelishwa, ndithumela nje i-amazon simahla, kwaye andenzi nto.
Juni 18, 2013 ngo-9: 18 PM
U-Amzagong wayedla ngokunika iwindows engenamda, kodwa njengayo yonke imibutho eneentlungu ezikhulayo, baye baba liesile elikhulu UKUHLAWULA…
Ngomhla wama-14 ku-Disemba 2008 ngo-8: 25 PM
Ndicinga ukuba iiAmazon Associates iseyeyona ibalaseleyo. Ngokuqinisekileyo ezinye zezixhobo zincinci, kodwa ukuba ungumphuhlisi, zikunika zonke izixhobo ozifunayo xa ufuna ukuthengisa.
Juni 18, 2013 ngo-9: 16 PM
Ngaba isiqingatha-esile yindlela yaseMelika?
Juni 17, 2009 ngo-3: 57 PM
Amazon.com Iwebhusayithi ye-Associates yiJOKA… andikwazi ukuhlaziya idilesi yam phantsi kwephee-info.html yekhasi. Ayongxaki kwikhompyuter yam okanye ngekuki okanye nge-firewall njengoko i-Amazon “inkxaso” icebisile. Bandixelele ukuba akukho nto banokuyenza ukundinceda ukuba ndihlaziye ukusuka kwidilesi yaseNyakatho Carolina ukuya kwelinye ilizwe. Ke, ndicinga ukuba ndiza kuvala iiakhawunti zam zeAmazon kwaye wonke umsebenzi wam odlulileyo ndiya kwi-binr atrash kunye neAmazon ayizukufumana ubusuku bokungalali ngenxa yokuphulukana nam njengesihlobo sabo KUPHELA ngenxa yokuba iwebhusayithi yabo iyintlekisa kwaye inkxaso yabo ' Nditsho nokuhlaziya idilesi yam! Andisayi kuphinda ndithenge nantoni na kwiAmazon.com!
Juni 17, 2009 ngo-4: 01 PM
UGoogle Adsense uhlawula iwebhusayithi yam amawaka eedola zaseMelika ngelixa iAmazon jusyt indibhatala i- $ 7- $ 12 ngenyanga. Andicingi ukuba kufanelekile, ndiza kususa amakhonkco e-amazon kwindawo yam kungekudala.
Juni 17, 2009 ngo-4: 31 PM
Ngendlela, ndiye ndabona nje ukuba bendihambisa iAmazon traffic kwiwebhusayithi yam emalunga neminyaka esi-6-8 ngoku kwaye khange ndiqonde ukuba i-ID sele irhoxisiwe- iAmazon ayizange indikhathaze indikhumbuze ukuba bendidubula ndingenayo Iimbumbulu… bethe cwaka kwaye bonwabile bathatha zonke izithuthi kunye nabathengi endibathumeleyo kwaye bangandixeleli ngobubele ukuba ndingayenza imali ngayo…
Juni 17, 2009 ngo-6: 11 PM
Inkxaso yeAmazon indinike le dilesi ye-imeyile ilandelayo ye-Amazon Associates Programme inkxaso: assoc-1@amazon.com Isiphumo: "Idilesi iyaliwe. Isizathu: 550 ”. Ngoku ndingumthengi wangaphambili Amazon.com...
Jul 19, 2009 ngo-11: 32 AM
U-Andrew, khange ucinge ukuba kukho into ecimileyo xa ungaboni ngeniso evela eAmazon iinyanga ezimbalwa?
Ngapha koko, esinye isizathu sokuba bacinge ngokuhlaziya inkonzo yabo kukuba okwangoku abakhelwanga kulandelo lwe-sub-id (ukulandelwa kwamagama aphambili) ekusebenzeni kwabo benza i-PPC…
Juni 18, 2013 ngo-6: 37 AM
Uyilungise njani ikhonkco? Ndinengxaki efanayo ukuzama kuyo ikhonkco kwi-wordpress.